မောင်မိုးညို......ရဲ့ "အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပာန် နှင့် အနာဂါတ်"
Virtual Life of Maung Moe Nyo and His Impression of Yesterday,Today and Tomorrow's Burma
ယခင်လများက အမေရိကရောက်မြန်မာများအတွက် မသိမဖြစ်သိသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံရဲ့အခြေခံသဘော တရားတွေတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီလမှာတော့ နေ့စဉ်အလုပ်ခွင်(သို့မဟုတ်)ကိစ္စကြီးငယ်တို့အတွက် ဘ၀ပျားပန်း ခတ်ကြရသူမြန်မာတွေအတွက် နားလည်လိုက်နာသင့်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုအာမခံ (Road Traffic Accidents)တွေ ဘက်လှည့်ကြရအောင်ပါ။ ဒီကိစ္စကလည်းအရေးကြီးပြီး၊ မိသားစုတိုင်းနဲ့ကင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စကြီးတခုပါ။ ကြိုတင် အသိပေးလိုတဲ့အချက်ကတော့ အာမခံကိစ္စအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတိုင်းဟာ၊ မိမိအာမခံဝယ်ယူရာကုမ္ပဏီကြီး များရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူဘောင်စည်းမျဉ်း(framework) ရဲ့သဘောထားထားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အခရာမို့ ဒီဆောင်းပါးဟာ၊ Casualty property insurance လို့ခေါ်တဲ့သူတပါးယာဉ်ထိခိုက်မှုအာမခံရဲ့ဘောင်တွေ ကိုချပြ တဲ့ ယေဘူယျ ဖွင့်ဆိုချက်တွေလို့ဆိုပါရစေ။
ယာဉ်တိုက်မှုလို့အရပ်စကားကနားလည်တဲ့Road Traffic Accident ဟာ accident လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ မတော်တဆဖြစ်မှုဆိုတဲ့အချက်ကို၊ သိနားစေကြလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်တမင်ကြိုတင်ကြံရွယ်မှု (premeditated act) မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို၊ ဥပဒေနဲ့ အာမခံရှူဒေါင့်တွေကကြည့် ရာမှာ၊ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖေါ်ထုတ်ကြရပါတယ်။ (Cause of accident) ယာဉ်တိုက်မှုအားလုံး လိုလိုတို့ဟာ တဖက်ဖက်ကယာဉ်စည်းကမ်းကိုဖေါက်ဖျက်ကြရာကနေပေါ်ပေါက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ကြောင့်တင်ကြို ကြံရွယ်မှုရှိခဲ့ရင် မှူခင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်သွားစေတဲ့အတွက် ရာဇ၀တ်မှုကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားပါတယ်။ စာရေးသူဆွေးနွေးလိုရင်းကတော့၊ တင်ကြိုကြံရွယ်ခြင်းအလျင်းမရှိတဲ့မတော်တဆမှုကြောင့်၊ ပေါ်ပေါက်ရတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ချိန်မှာ သတိဘယ်လိုဘဲကောင်ပြီးဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုရှိပါစေ၊ လိုက်နာသင့်တဲ့ကိစ္စတွေလစ် ဟင်းမှုရှိတတ်ကြတာဓမ္မတာပါ။ စာဖတ်ပရိဿာတ်အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ပြန်သတိပေးပါရစေ။
- ထိခိုက်နာကျင်မှုရှိရင် (911) မှတဆင့်ဆေးအကူအဖွဲ့ (Emergency Tech) နှင့်ရဲကိုခေါ်ပါ။ ထိခိုက်မှု မရှိပါက ယင်းအကူအဖွဲ့ရောက်လာလေ့မရှိပါဘူး။ လာခဲ့လျင်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်(သို့မဟုတ်) ပါတ် သက်သူ အားလုံးတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီဖလှယ်ပေးခြင်းသာပြုလုပ်ပါတယ်။
- ရဲအရာရှိက စစ်ချက်ယူခဲ့ရင်၊ အများအားဖြင့်ယာဉ်စည်းကမ်းကျူးလွန်သူကိုဦးစွာပထမစစ်ဆေးမေးမြန်း လေ့ရှိတာကိုသတိချပ်ပါ။ ရဲအရာရှိကပေးတဲ့ Case (အမှုတွဲနံပါတ်) ကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ရဲအရာရှိရဲ့မှတ် ချက်အရ၊ ကျူးလွန်သူဟာပြစ်ဒါဏ် (charge) အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသော်လည်း၊ အာမခံကုမ္ပဏီရဲ့ ပြစ် ဒါဏ်သတ်မှတ်ချက်ဟာရဲအရာရှိရဲ့ အယူအဆနဲ့ကွာခြားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိချပ်ပါ။
- တိုက်ခံရသူနှစ်ဖက်လုံးက စာရွက်စာတမ်းလဲလှယ်ရာမှာ၊ အာမခံကတ်ပြား၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နဲ့ ယာဉ်တို့ရဲ့ Year,Make နဲ့ model တွေပါဘို့လိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ကိုယ့်မှာပါလာတဲ့ Cell Phone နဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ယူထားလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်မိမိလိပ်စာ/ဖုံးနံပါတ်တို့ကို တဖက်သူကိုမပေးတာအ ကောင်းဆုံးပါ။ အကျိုးထက်အပြစ်များတတ်ပါတယ်။
- အမြန်ယဉ်လမ်းမကြီးဖြစ်ရင် ကိုယ့်ကားထဲကအပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့။ ထိခိုက်နာကျင်မှုအလျင်းမရှိခဲ့ရင်၊ နီးစပ်ရာ လမ်းဆုံကိုကိုယ့်ကားကိုရွှေ့ပြီးမှ၊ ကားထဲကထွက်ပါ။
- နောက်ဆုံးဆိုပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့၊ ကိုယ်ကကျူးလွန်မိရင်တောင်၊ ၀န်ခံစရာမလိုပါဘူး။ အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ရဲအရာရှိတို့ရဲ့ ကျွမ်းကြင်မှုဆိုင်ရာအဆုံးအဖြတ် (Technical Impression/ Conclusion) ဟာ ပဓါနဖြစ်ပါတယ်။
- မိမိရဲ့ယာဉ်မောင်းနှင်မရအောင်၊ ဘီးရွေ့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ နီးရာယာဉ်ပြင်ဆင်ရာဌာနကို ကိုယ့်ကားကို သယ်သွားဘို့ Tow Company ကိုခေါ်ရပါမယ်။ ရဲများကတာဝန်ယူပေးပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ သယ်သွားတဲ့ Tow Company နဲ့သယ်သွားမဲ့ Body shop အမည်/လိပ်စာတွေကိုမှတ်သားထားဘို့အရေးကြီးပါ တယ်။ မိမိကား(ပျက်စီးရာအစိတ်အပိုင်းများ) နဲ့တဖက်ကယာဉ်တိုိ့ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ယူထားပါ။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး အချိန်ရရင် (သို့မဟုတ်) အချိန်မရခဲ့ရင်လည်း နောက်တနေ့အတွင်း ကိုယ့်ရဲ့အာမခံကုမ္ပဏီ ကိုအကြောင်းကြားဘို့လိုပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုအကြောင်းကြားတာအကောင်းဆုံးလို့ဆိုချင်ပေမဲ့၊ ကိုယ့်မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကြိမ်းသေပေါက်သေခြာခဲ့ရင်တော့ တဖက်အာမခံကုမ္ပဏီကိုအကြောင်းကြားနိုင်ပါ တယ်။ ဒါတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးဘို့တာဝန်အတွက်ကိုယ်ကငွေကြေးပရီမီယံပေးသွင်းရတာကိုး။ ဒီကိစ္စဟာအ မြင်အမျိုးမျိုးကွဲနိုင်သလို၊ အကျိုးအမြတ်လည်းကွာနိုင်တာမို့အကျယ်တ၀င့်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။ နောက်တချက်က ဟာဉ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်ဒါဏ်ရာရနာကျင်မှုမဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ပါဝင်ပါတ်သက်ကြ သူတွေမေးလေ့ရှိတဲ့ကိစ္စက အာမခံကုမ္ပဏီများကိုအကြောင်းကြားသင့်၊ မကြားသင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါဘဲ။ ထိခိုက်တဲ့ ပျက်စီးမှုကမိမိတို့ အိပ်စိုက်သတ်မှတ်ငွေ (Deductible) ထက်မများခဲ့ရင်၊ အကြောင်းမကြားဘဲနေလို့ရပါတယ။် ဒါပေမဲ့တဖက်ကသူက သက်ဆိုင်ရာယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရာဌာနကြီး (Motor Vehicle Department) ကို အကြောင်းကြားခဲ့ရင်တော့၊ ကိုယ်မှာအပြစ်ရှိမရှိကိုသက်သေထူဘို့လိုသွားတတ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်ကာလမှာ တရိပ်ရိပ်တက်နေတဲ့ယာဉ်ပြင်ဆင်စရိတ်တွေကြောင့်၊ ဆိုခဲ့တဲ့ Deductible ထက်ပိုမိုများလေ့ရှိပါတယ်။ အရေးကြီး တာကတော့ ပထမဆုံးဖုံးခေါ်အကြောင်းကြားခြင်း (First Report)ဟာ မိမိဘက်ကအစပျိုးတဲ့ကိစ္စ တခုသာဖြစ် ပြီး၊ အာမခံကုမ္ပဏီကဆက်လုပ်ရမဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသွားပြီလို့ယူဆို့မရပါဘူး။ မိမိရဲ့တိုင်ကြားချက် ပေါ်မှာ တာဝန်ချထားခြင်းခံရတဲ့ Claims Adjuster ကမိမိထံဖုံးပြန်ခေါ်ပြီး၊ မိမိရဲ့ တိကျတဲ့ ထွက်ဆိုချက် (Statement) မတောင်းမချင်း၊ ဇာတ်လမ်းမစရသေးဘူးလို့မှတ်ပါ။ Statement ပေးရာမှာ-
- ဖြစ်စဉ်လိုရင်းကိုတိတိကျကျပြောပါ -နေ့ရက်အချိန်၊ နေရာ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ယာဉ်လမ်းကြော အခြေအနေ၊ ယာဉ်တိုက်ခိုက်ပုံ၊ ဖြစ်စဉ်တဆင့်ပြီးတဆင့်။
- မျက်မြင်သက်သေ(မိမိယာဉ်ထဲကပါလာသူမဖြစ်စေရ။) ရှိပါက ရှိကြောင်း - အမည်နဲ့ဖုံးနံပါတ်။
- မိမိကဦးစွာလမ်းအသုံးပြုခွင့်ရှိ/မရှိ Right of the way
- မိမိယာဉ်ပြင်ဆင်ရန် Collision center (Body Shop ဟုအများကသိ) တောင်းခံရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် Body shop ကိုသုံးခွင့်ရှိတာမို့ ဆန္ဒရှိရင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိအာမခံကုမ္ပဏီ ကအဲ့ဒီပြင် ဆင်တဲ့ရုံ ကိုတိုက်ရိုက်ငွေချေချင်လဲချေမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တန်ဘိုးနည်းတယ်လို့ယူဆရင်မိမိဆီကိုငွေ ထုတ်ပေး ပါမယ်။ ဒီနေရာမှာသိထားဘို့ကငွေထုတ်ပေးပြီးမပြင်ဆင်ခဲ့ရင်၊ အာမခံကုမ္ပဏီများကမိမိ ကားပြင်မပြင်၊ နောက်ကြောင်းလိုက်တတ်တာကို သတိပြုကြပါ။
- အာမခံကုမ္ပဏီက မည်သူ့မှာ ရာနှုန်းဘယ်လောက်အထိအပြစ်ရှိကြောင်းစာကိုအမှုတွဲပိတ်ပြီးရင်ထုတ် ပေးလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာကအရေးကြီးပြီးနောင်မှာသက်သေအနေနဲ့သုံးဘို့လိုကောင်းလိုနိုင်ပါ တယ်။
- အရေးကြီးဆုံးကတော့ သည်းခံစိတ်မွေးပါ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာများဟာ အမှုကိစ္စတခုဖြစ်လာရင်ရှေ့နေအားကိုးတတ်တဲ့စရိုက်အလွန်ကြီးပါတယ်။ ဘာသာ စကားအကျွမ်းမ၀င်မှုနဲ့ စာရွက်စာတမ်းကြောက်တတ်ကြတဲ့အတွက်၊ ရှေ့နေများကစရိတ်စကပေးစရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်များ (အများအားဖြင့်မိမိအိပ်စိုက်ပေးစရာမလိုလို့ကမ်းလှမ်းကြလေ့ရှိပါတယ်။) ရှိခဲ့ရင်၊ ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုဘဲတားတား၊ ရှေ့နေငှားကြလေ့ရှိပါတယ်။ စရိတ်ရော၊ ကရိကထကင်းတာကိုး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအမြင်မျိုးစုံရှိတာမို့၊ သတိပေးလိုတဲ့အချက်ကြီးခုကတော့၊ မိမိကရှေ့နေငှားရမ်းခဲ့ရင်၊ ရှေ့နေများရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကိုသံသယစည်းခြားပြီးယုံဘို့လိုပါတယ်။ ရှေ့နေကဘက်လိုက်နေလား၊ လုပ်စရာကိစ္စ ကိုပြည့်စုံအောင်၊ ကျေပွန်အောင်မလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့သံသယစိတ်တွေပွားတတ်ကြပြီး၊ စိတ်ပူပန်မှုတွေပေါ်လာ တတ်ပါတယ်။ ဒီဟာဘာ့ကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့၊ ရှေ့နေများဟာ ရှေ့နေဆိုတဲ့အတိုင်း၊ ကိုယ့်ဘက်ကလက် မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ချည်နှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားဖြစ်အာင်လုပ်တတ်သလို၊ သူတို့ဘက်ကအသာစီးကိုယူထားလေ့ရှိ ကြပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ရှေ့နေငှားတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းကြီး(၂)ခုကိုဖေါက်သယ်ချ ပါရစေ။
(က) အမှုတွဲအစမှအဆုံးအထိ၊ မိမိအိပ်ကပ်မှတပြားတချပ်မှအကုန်ကျခံစရာလိုခြင်းရှိမရှိ။ (ဒီနေရာမှာစာရွက် စာတမ်းခ နဲ့တရားရုံးစရိတ်လိုခဲ့ရင်တို့ကိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးပါ။) ကုန်ကျခံရနိုင်မဲ့ စရိတ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးပါ။
(ခ) မိမိအမှုတွဲနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ အစမှအဆုံးတိုင် မိမိကို၊ မပျက်မကွက်ကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိ၊ (Representation of the entire legal process even the appeal is required) အမှုရှုံးနိုင်ချေရှိရင်၊ တ၀က်တပျက်နဲ့ ရှေ့နေကဆက်လက်လိုက်ပါနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်း၊ စာပို့ခံရသူတွေဒုနဲ့ဒေးပါ။
(က) ယာဉ်ပြင်ဌာန (Collision Center) ကပျက်စီးမှုအစီရင်ခံစာနှင့်စရိတ်တွက်ချက်မှု၊
(ခ) ရဲအရာရှိရဲ့သဘောထား (ရှိခဲ့ရင်လည်း အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်)
(ဂ) ယာဉ်ချင်းထိခိုက်မိသောနေရာ (Point of contact) ဒီအချက်ဟာ ဘယ်သူအပြစ်ရှိတယ်၊ ဘယ်လောက် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသက်သေထူစေနိုင်တဲ့ညွှန်ပြချက်တခုပါ။
(ဃ) ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းချင်းရာ၊ လမ်းကြောင်းအပေါ်ဦးစွာရောက်ရှိနေသောယာဉ်ရဲ့ right-of-the-way
(င) ယာဉ်စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်မှုပါတ်နေသက်နေမှု အတိုင်းတာ (moving violation) (မီးနီကိုဖြတ်ပြေးတာ၊ ယာဉ်မောင်းရင်းဖုံးစကားပြောတာ၊ စသဖြင့်)
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ယာဉ်တိုက်မှုတို့ဟာ မတော်တဆမှုလို့ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်၊ တဖက်ဖက်သောယာဉ်မောင်းသူ ဘက်က၊ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်တတ်ကြတာမို့၊ ယာဉ်စည်းကမ်းလိုက်နာရေးဟာမိမိကိုယ်ကိုယာဉ်မောင်းစဉ်မှာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုရဲ့အသက်သွေးကြောတခုပါဘဲ။ အမေရိကပြည်ထောင်စုတ၀ှမ်းမှာ၊ ယာဉ်စည်းကမ်း ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အမှတ်အသားများဟာ၊ တမင်သက်သက်ချဲ့ထွင်ထားခြင်းတွေမရှိပါဘူး။ လမ်းအသုံးပြုကြသူ တိုင်းမဖြစ်မနေလိုက်နာကြဘို့အရေးကြီးပါတယ်။
မိမိတို့နေထိုင်ရာနေအိမ်များသို့ဘေးကင်းရန်ရှင်းစွာပြန်ရောက်လာမှာကိုမျှော်လင့်ကြတဲ့၊ စာဖတ်ပရိဿတ်တို့ရဲ့ မိသားစုတွေရဲ့တောင့်တချက်တွေကို အမြဲသတိရကြပါလို့။ ။
Posted by မောင်မိုးညို at 8:29 PM
အရေးပေါ် ဆေးကုသရခဲ့သော် - ကျန်းမာရေးအာမခံတို့၏သဘော
ပြီးခဲ့တဲ့လများက အမေရိကရောက်မြန်မာတို့အတွက် စိမ်ခေါ်မှုများစွာကြုံကြိုက်ကြရတဲ့ အာမခံအမျိုးအစား များထဲက ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ ယာဉ်မတော်တဆတိုက်ခိုက်မှုတို့အကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး၊ အရေးကြီးတဲ့အ ခြေခံအချက် အလက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ ခက်တာက တိုးတက်ဆန်းသစ်လာတဲ့နည်းပညာတွေ နဲ့ရှုတ်ထွေးလာတဲ့လူနေမှုသဘာဝတွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမဲ့အာမခံစနစ်ကို အာမခံကုမ္ပဏီကြီးငယ်တို့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ အာမခံကုမ္ပဏီများလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိတို့ကအာမခံပေးရသူတွေအပေါ် လွှမ်းခြုံကာကွယ်မှုတွေပေးကြရသလို၊ အကျိုးအမြတ်ပေါ်ထွက်လာရေးကိုလည်းအမြဲမျက်ခြေမပြတ်ပြုကြလေ့ ရှိပါတယ်။ အာမခံကုမ္ပဏီတွေက ဈေးတိုးတက်ကောက်ခံမှုတွေလုပ်တာကို၊ ထိမ်းကွပ်ဖို့အတွက် အမေရိက ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကလေ့လာစောင့်ကြပ်ကြရပါတယ်။ ဈေးကွက်(market competition) နဲ့စားသုံးသူလူထုရဲ့ ကုန်ကျခံနိုင်မှုအင်အား (affordability/portability) ကိုအမြဲချိန်ထိုး နေကြ ရပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ကြပ်ဘို့ insurance commissioners တွေကတာဝန်ယူကြရပါတယ်။ ဒီရာထူးများ ဟာ ရွေးကောက်ခံရာထူးများဆိုသော်လည်း၊ အာမခံငွေရေးကြေးရေးနယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပညာရှင်များ သာဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲစောင့်ကြည့်တယ်ဘဲပြောပြော တနေ့တနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့စီးပွားရေး၊ အတက်အကျနဲ့ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုနဲ့တရိပ်ရိပ်မြင့်မားလာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေက အာမခံပရီမီယံကြေးတွေကိုတွန်း တင်ပေးနေပါတယ်။ အာမခံကုမ္ပစီတွေရဲ့ရပ်တည်နိုင်မှု၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုတို့ဟာပရီမီယံပေါ်မှာလုံးလုံးလျားလျား တည်နေတာမို့၊ ပရီမီယံကြေးအတက်အကျပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းဟာ၊ အာမခံ plans တွေရဲ့လွှမ်းခြုံပေးနိုင်မှု အတိုင်းအတာ (coverage levels)တွေကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာ အများဆုံးသက်ရောက်မှူရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိစ္စတွေကတော့ ဆရာဝန်များရဲ့စမ်းသပ် ကုသမှုနဲ့အရေးပေါ်ကုသမှုတွေပါဘဲ။ ဒီလမှာတော့ မြန်မာတိုင်းတနည်းမဟုတ်တနည်း၊ တနေ့မဟုတ်တနေ့၊ မိမိကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ မိမိသားချင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးကသော်၎င်း၊ ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ အရေးပေါ်ကုသရမှု အ ကြောင်းတစေ့တစောင်းကြည့်ကြရအောင်။
အရေးပေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဟာ ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ၊ သိနိုင် စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်၊ လူတိုင်းဟာဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ကြပြီး၊ အဓိကကျတဲ့အာမခံပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စ တွေမှာလွဲချော်မှုတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တဖက်ကျန်းမာရေးကြောင့်ပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာ၊ ကုသမှုဆိုင်ရာ အာမခံစာရွက်စာတမ်းများနဲ့ ဖုံးပေါ်မှာအပြန်အလှန်ငြင်းခုံစကားပြောရမှုတွေကစိတ်ထိခိုက်မှုအတိုင်းအတာကို တိုးသွားစေပါတယ်။ စည်းကမ်းကလနားနဲ့စာရွက်စာတမ်းကြောက်တတ်ကြတဲ့မြန်မာတွေအတွက် အဲ့ဒီဒုက္ခက ပိုဆိုးစေပါတယ်။ တချို့ကလည်းဒီနားမလည်မှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးရမှုကို ရှက်စရာကိစ္စလို့လွဲမှားစွာသဘောထားမိ ပြီး၊ တိုင်ပင်သင့်သူ၊ အသိပေးသင့်သူတွေကိုအသိမပေးဘဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ ထားရာကနေမရှုနိုင်မကယ်နိုင်နဲ့ ငွေရေး ကြေးရေးဒုက္ခတွေရောက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလွဲချော်တဲ့အယူအဆကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရှောင်ရှား ကြဘို့ လိုပါပြီ။ အာမခံမရှိတာဟာ မိမိရဲ့ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို၊ သဘောသဘာဝကိုကောင်းစွာနား မလည်ကြ သူတွေကပိုများတာကိုဝမ်းနည်းဘွယ်တွေ့ရပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်လာရင်၊ ဖေးမသူထက်၊ ပြစ်တင်ကြသူတွေများတဲ့မြန်မာ့လူနေမှုစရိုက်က ပိုလို့တောင်အော့နှလုံးနာစရာပါ။ ကိုယ်ကနားလည်ရင်ရှင်း လင်းပြပြီး၊ နားမလည်ရင်နားလည်နိုင်မဲ့သူဆီလမ်းညွှန်ဘို့စိတ်ကူးမရှိကြတာက ရှက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံ ရေးစနစ်တခုပါ။
မိမိသော်၎င်း၊ မိမိသားချင်းမိတ်ဆွေသော်၎င်း အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုဖြစ်လို့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ မှာပြသ ကြရပြီဆိုရင်သိသင့်တဲ့အချက်အချို့ကို တင်ပြပါ့မယ်။
(က) ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြားဟာမိမိကိုယ်နဲ့မကွာအမြဲရှိပါစေ။ (အိမ်မှာနေ ချိန်ကလွဲရင်ပါ။) အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြားလို့ဆိုတာကြောင့် မိမိကုသမှုခံယူတဲ့နှစ်ကာလ policy term မှာ အကြုံးဝင်တဲ့ကတ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Medi-Caid/Medicare ၀င်ဖြစ်ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံဆေးခန်းအုပ်စု (Medical Group) ရဲ့အသိအမှတ်ပြုကတ်ပြားပါပူးတွဲရှိနေရပါမယ်။
(ခ) အရေးပေါ်ကြောင့်ဆေးရုံ(သို့မဟုတ်)လူနာတင်ယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အာမခံရှိကြောင်းမရှိကြောင်း မေးရင်၊ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပြဘို့လိုပါတယ်။ အသက်ငယ်ရွယ်သူကလေးငယ်များနဲ့ အသက်(၆၅)နှစ် အထက်ရှိကြသူတွေအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့အာမခံလွှမ်းခြုံမှုကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေး တာဝန်ရှိသူများ (သို့မဟုတ်) ဆေးရုံ accounting ဌာနမှပုဂ္ဂိုလ်များကအချက်အလက်များလာရောက်တောင်း ခံလေ့ရှိပါတယ်။
(ဂ) ဒီနေရာမှာ အာမခံကတ်ပြားပေးလိုက်ခြင်းသည်၊ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ/လူနာတင်ယာဉ်တို့က ဆက်ပြီး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တထစ်ချယုံလို့မရပါဘူး။ မိမိအရေးပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဆေးရုံဌာနတို့ဟာ မိမိအာမခံရဲ့လွှမ်းခြုံမှုအောက်မှာအကြုံးဝင်တဲ့နေရာမဟုတ်ရင် အထူးသတိချပ်ရမဲ့ကိစ္စက၊ မိမိအာမခံကုမ္ပဏီကို ဖုံးပြန်ခေါ်ဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကတ်ပြားလေးလက်ကမ်းပေးလိုက်ခြင်းကကိစ္စကိုပြီးမြောက်မသွားစေပါဘူး။ မိမိကဖုံးပေါ်မှာသော်၎င်း၊ လက်မှတ်ထို၍သော်၎င်းမိမိကခွင့်ပြုခြင်း(authorization) မပြုသရွေ့၊ claims process ကခရီးဆက်မသွားပါဘူး။ အများအားဖြင့် မိမိကုသခွင့်လွှမ်းခြုံဒေသထဲမှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်း မဟုတ် ခဲ့ရင် အဲ့ဒီဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးဘို့လိုသလို၊ မိမိအာမခံကုမ္ပဏီထံမှာလည်းဖုံးခေါ်ပြီးဘဲဖြစ် ဖြစ်ခွင့်ပြုကြောင်းလက်မှတ်ထိုးရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် (၂)နေရာလုံးမှာလုပ်ပေးဘို့တာဝန်ရှိကြောင်းသတိချပ်ပါ။ အရေး ပေါ် ဖြစ်စဉ်က သတိမထားမိသော်လည်း၊ မိမိကိစ္စမိမိဖြေးရှင်းရေးမှာ မိမိတာဝန်သာဖြစ်သည်ကိုသတိချပ်ပါ။
(ဃ) ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတို့ကလာရောက်ပြောဆိုသောစကားကိုနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့စောဒကကိုချက်ချင်း မတင် မိကြဘို့လိုပါတယ်။ စကားပြန်များမှတဆင့်စကားပြောနိုင်သော်လည်း၊ များသောအားဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင် ရာဝေါ ဟာရကိုနားလည်နိုင်သော မြန်မာစကားပြန်အလွန်ရှားပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအရ၊ နားလည်မှုလွဲမှား ခြင်းများ ကြုံတွေ့ဘူးပါတယ်။ HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act) မှာပြဆိုထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကမှတ်တမ်းများလျှို့ဝှက်တားမြစ်ချက်များကြောင့်၊ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကဆေးဝန် ထမ်းကိုတိုက်ရိုက်ပြောဆိုရန်လိုသည်ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ နားမလည်လျင်နားလည်အောင် ရှင်းပြရန်ဆေးဝန်ထမ်းတို့မှာတာဝန်ရှိကြတာမို့၊ ဆေးဝန်ထမ်းတို့နှင့်ဘာသာ စကားကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသောမြန်မာ တို့အခက်အခဲများကိုတွေ့ကြုံတတ်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားလည်မှုလွဲ မှားခြင်းကြောင့်အမှားကြီးများကြုံရ ခြင်းအလွန်နည်းပါတယ်။
(င) ကိုယ်ခံစားရသောဝေဒနာကို အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပါ။ မထိမ်ချန်ပါနဲ့ပါတယ်။ ရောဂါခံစားရမှု လက္ခဏာ(၂၄)နာရီပြည့်တဲ့အထိဆရာဝန်များကစောင့်ကြည့်ပြီးမှအိမ်ပြန်လွှတ်လေ့ရှိတာမို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ရောဂါခံ စားရမှု အခြေအနေတင်ပြချက်က အခရာကျလို့နေပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမှ အရေးပေါ်ပြန်ပြရတာမျိုး တွေကြုံဘူးလို့ပါ။
(စ) အမေရိကမှာရှိတဲ့လူနာတွေကိုအိမ်ကလူနာကလိုက်ပြီးစောင့်အိပ်တာမျိုးကို ခွင့်မပြုကြပါဘူး။ အသည်း အသန်လူနာဆိုရင်တောင်၊ လူနာစောင့်ခန်သီးသန့်မှာနေကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် လူနာဖြစ်သူကာယကံရှင် တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကြဘို့အလေ့အကျင့်ပြုကြဘို့လိုပါတယ်။ လူနာစောင့်မရှိလို့အားငယ်ရမယ်ဆို တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ကြောင်းပါ။ မိမိရဲ့လက်တကမ်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကိရိယာတန်ဆာပလာများကို လေ့လာပြီး အသုံးပြုတတ်အောင်လေ့လာပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ။
(ဆ) မိမိရောဂါခံစားရမှုကြောင့်သူနာပြုကိုခေါ်ရတာဝန်မလေးကြပါနဲ့။ သူနာပြုများရဲ့ပဓါနတာဝန်တွေထဲမှာ၊ လူနာနဲ့ဆရာဝန်ကြားအချိန်မလပ်ကူးလူးဆက်သွယ်ပေးရမဲ့တာဝန်ရှိတာမို့ မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ခံစားရမှ သူနာပြုဆီ ပြေးရတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။
(ဇ) အရေးပေါ်လို့ဆိုတာကြောင့် မိမိရဲ့နေ့တဓူဝလုပ်နေကျလှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုတမဟုတ်ခြင်းရပ်ဆိုင်းသွားစေ မဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စများကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုမဟုတ်ဘဲ အရေးပေါ် ဌာနကိုအသုံးပြုမိလို့ဒါဏ်ကြေးပေးကြရသူမျိုးတွေတွေ့မိပါတယ်။
(ဈ) သည်းခံပါ။ အခက်ခဲဆုံးကိစ္စပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနတွေဟာ လူများပြည့်နှက်တတ်တာမို့ စိတ်မရှည်နိုင်စရာကြုံတတ်ကြရပါတယ်။ မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုသော်၎င်း၊ လုပ်နေကျကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းသွားစေတယ်ဆိုရင် (911) လူနာတင်ယာဉ်ကိုခေါ်ဘို့လက်မနှေးကြပါနဲ့။ လူနာတင်ယာဉ်လာလမ်းကို ကြိုတင်ရှင်းလင်းထားပေးဘို့လဲလိုပါတယ်။
(ည) မိမိရောဂါအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီး (observation) ပြင်ပလူနာဌာနကနေ ဆေးကုသဘို့လိုအပ်ရင်၊ ဆေးရုံ (triage) ကိုတင်လေ့ရှိတာမို့၊ ပြင်ပလူနာဌာနအရေးပေါ်ကုသခြင်း (Emergency Room ER) နဲ့ ဆေးရုံတင်ကုသခြင်း (Hospitalization) မတူသလို ပေးသွင်းရမဲ့ အာမခံကြေး co-payment (သို့မဟုတ်) deductible လဲမတူဘူးဆိုတာသတိချပ်ပါ။ သေခြာတာကတော့ (၂)ခုလုံးအတွက်မပေးသွင်းမိစေဘို့ပါဘဲ။
ဝေဒနာကြောင့်စိအတိဒုက္ခရောက်ရတဲ့အထဲ အာမခံစနစ်နဲ့ဆေးရုံလည်ပါတ်မှုစနစ်တို့ရဲ့သဘောကို နားမလည် ခြင်းက ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးနေရာရောက်ပါတယ်။ အရေးပေါ်သော်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံဗဟုသုတသက်လုံကောင်း နိုင်အောင်၊ မျက်စေ့ဖွင့်နားစွင့်ကြဘို့လိုကြောင်းအမေရိကားရောက်မြန်မာမိသားစုများကိုနှိုးဆော်လိုက်ရပါ တယ်။
Posted by မောင်မိုးညို at 5:17 PM
မောင်မိုးညို ရဲ့ မိသားစု (၁၉၆၀ နှစ်လွန်)
မိုးညို ဖဆပလ (တည်မြဲ) အမတ်လောင်း ဦးကိုကိုကြီး (၁)
မိုးညို ဖဆပလ (တည်မြဲ) အမတ်လောင်း ဦးကိုကိုကြီး (၂)
၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ လန်ဒန်မြို့မှ ထုတ်ဝေသော "Who's Who In Burma" (စာ-၃၇)
ဦးကိုကိုကြီး နှင့် ဒေါ်စိန်ရင်
"I wish I will be able to witness the fruit of true democracy that shine upon all my countrymen" - inspired by my beloved parents MOENYO U Ko Ko Gyi (ex-Parliamentary Secretary) & Daw Sein Yin B.Com. R.A.
ဤ blog တွင်ဖေါ်ပြထားသော စာမူအားလုံး သည် မောင်မိုးညို၏ မူပိုင်ဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိ၏အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအခေါ် နှင့် သုတေသနပြုချက်များအပေါ်တွင်သာ အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်ရှိပါကလည်း ဖေါ်ပြထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာသင့်သော အခြား website များ
"ဧရာဝတီ" ONLINE MAGAZINE
မြ၀တီ တပ်မတော် သတင်းဌာန
ကုလားကာနောက်ကွယ်သို့ ၀င်ရောက်တော့မည့် တပ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ နှင့် “လွှတ်တော်ထဲရောက်မှပြောင်းယူမယ်” ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြသော အတိုက်အခံအမတ်မင်းများ အကြောင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ထုတ်စ အစိုးရသတင်းစာရှေ့မျက်နှာဖုံးတွေမှာ သမ္မတ နဲ့ ဒုတိယသမ္မတများ အဖြစ်အရွေးချယ်ခံကြသူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်ထိပ်ဆုံးကနေ စစ်...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကြီးမှာ ဗိုလ်ခင်အောင်မြင့်ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ဗိုလ်ရွှေမန်းရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ြ...
စာေ၇းဆ၇ာ၇န်ကုန်ဘဆွေဟာမြန်မာ့စစ်သမိုင်းမှာကနဦး “ပြောက်ကျား”စစ်ဆင်ေ၇းကိုအောင်နိုင်စွာသုံးနိုင်ခဲ့သူပါ။ တကယ်တော့ကမ္ဘာစစ်သမိုင်းမှာတောင်မှတ်တမ...
မြန်မာပြည်သူတို့အတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်နေသော မိသားစု လူမှုရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု (social protection/security) နှင့် မျက်မှောက်ခေတ်ကာလ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးအချို့၏နမူနာပြ social protection programs များ။
“ဆိုရေးရှိကဆိုနိုင်ကြသော” (တနည်း) “ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများ ပြည့်နှက်နေသော” ခေတ်တခုဆီသို့ မောင်မိုးညိုတို့အပါအ၀င် ပြည်သူအားလုံးက အရှိန်အဟုန...
အမေရိကား တ၀ှမ်းနေထိုင်ကြသော မြန်မာလူမျိုး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ (၁၀၀၂၀၁) ဦးရှိပြီ
ပြီးခဲသော (၂၀၁၁) အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းက အမေရိကနိုင်ငံ အဓိကရ လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းဌာနကြီး (Census Bureau) ၏နောက်ဆုံးပိတ်စာရင်းချုပ်ထုတ်...
“သိပါသလားခင်ဗျာ၊ သိပါတယ်ဆိုရင် ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသလားခင်ဗျာ၊ ဘယ်တော့လောက်များ ဆောင်ရွက်ပါမလဲခင်ဗျာ၊ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊”
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် အပြင်လူတယောက်က ရုံးတရုံးမှာသိချင်တာရှိလို့ မရဲတရဲနဲ့မေးနဲ့တဲ့ မေးခွန်းလို့ထင်စရာရှိပါတယ်။ မဟုတ်ရေးချမဟုတ်ကြောင်းပါခင်...
ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
NO LONGER A SECRET …ဆိုဘဲ…
မနေ့ကလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတဲ့ သမ္မတဆိုဘားမားရဲ့ မှတ်မှတ်ရရ စကားစုကလေးပါ။ ဒီလိုရှိပါတယ်၊ မောင်မိုးညိုဟာ အိုဘားမားရဲ့ ဒီမိ...
ခက်မ(၅)ဖြာ နှစ်တပါတ်လည်သောအခါ (၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၂)
အုပ်ချုပ်ရေးခက်မ (မဏ္ဍိုင်) ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံဒေသဆည်ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးရပ်ဆိုင်းသည့်ကိစ္စမှစ၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလိုလိုလွှတ်ပေးခြင်...
"မောင်မိုးညို"၏မူပိုင်. Simple theme. Theme images by luoman. Powered by Blogger.